वामदेवको प्रश्न : मिलेको पार्टी फुट्न किन सक्दैन ? भनेपछि… — newsparda.com
वामदेवको प्रश्न : मिलेको पार्टी फुट्न किन सक्दैन ? भनेपछि…
काठमाडौं, । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीभित्रको विवाद समाधानको लागि आफूहरुले पहल गरेको स्पष्ट पारेका छन् । तर, मिलेको पार्टी फुट्न किन सक्दैन् ? भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
दाङमा आज आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मर्दै नमर्ने व्यक्ति कोही नहुने र त्यो प्रकृतिको नियम भएजस्तै मिलेका पार्टी फुट्नु कुनै नौलो कुरा नहुने पनि धारणा राखेका थिए ।